State Iowa sababa Covid-19 warra qabaman osoo hin tain warra duan hordafuu jira, jijjiiramni kunis l | KWIT
Oromo News 12.08.2020
Manni fayyaa Siouxland dabalataan guyyaa har’aa Woodbury County keessati dabalame jira, waliigalatti 142 dha. Haatau male, system haarawa akka mullisutti namni due 126 dha. Hatau male lakkoofsi sun jijjiiramu nimala. Namni haarawni dhukubaan qabame 55 yoo tau, waliigalatti 11,069 dha.
Lakkoofsi namni South Dakota keessati due 1,111 dha erga namni dabalataan tokko due dabalame booda. Lakkoosi nama hospitala galee jirummoo Novemver 5th as harka shaniin gad xiqqaate jira.
Lakkoofsi nama Nebraska keessati virus dhaan qaban kan xiqqaate taus akka ogeessi fayyaa jedhutti dhukkubiche haala guddaa irra akuma jiru jira jedhe. Hanga ammaati addaan hin bafamne erga ayyaana Thanks giving wal qabamanin booda.
November wayta filannoo irrati yaada haakimoota mariwana dhiyeesudhaf Nebraska keessati gareen tokko qoricha seera gochuuf duula haarawa 2022 jalqabanii jiru.
Walitti qaabaan Nebreska kan medicala Nebraska akka jedhetti seera haarawa fi karaa harawa banuu yaadani Marwaanadhaf. Gareewan sunniinis malattoota gahaa argatan akka marwaana hayyamamu kan goosisu. Garuu supereme court Nebraska ammoo akka baduu goosisani erga warri repaplicana mormii godhan booda. Osoo walmormiin argama jiruu garuu akka hayamni kun argamu bakka guddaan mulatta waan Gov. Pete Ricketts hayyama kun akka kennamu barbaadus.